Wararka - Maxay tahay sababta caaryada duritaanka loogu qalabaysan yahay nidaamka qiiqa?
Waa maxay sababta caaryada duritaanku ay ugu qalabaysan yihiin habka qiiqa?
Dib looga daabacay qaabaynta irbad yar
Daalka caaryada duritaanka ayaa ah dhibaato muhiim ah oo ku jirta naqshadeynta caaryada, gaar ahaan qaabeynta duritaanka degdegga ah, shuruudaha qiiqa ee caaryada duritaanka ayaa aad u adag.
(1) Isha gaaska ee caaryada duritaanka.
1) Hawo ku jirta nidaamka gating iyo dalool caaryada.
2) Qaar ka mid ah alaabta ceeriin waxaa ku jira biyo aan qallajin laga saarin.Waxa lagu gaas ku shubaa uumiga biyaha heerkul sarreeya.
3) Gaaska ay soo saarto burburka caagag aan degganayn oo ay ugu wacan tahay heerkulka sare ee xilliga duritaanka qaabaynta.
4) Waa maxay sababta nidaamka qiiqa loo dejiyo caaryada duritaanka gaaska ee ay dhaliso isbedbedelka ama fal-celinta kiimikada wadaagga ah ee lagu daro qaar ka mid ah alaabta ceeriin ee caagga ah?Waa maxay sababta nidaamka qiiqa loo dejiyo caaryada duritaanka.
(2) Halista qiiq liidata
Daalka liidata ee caaryada duritaanku waxay keeni doontaa khataro taxane ah tayada qaybaha balaastikada iyo dhinacyo kale oo badan.Bandhigyada ugu waaweyn waa sida soo socota:
1) Inta lagu jiro habka cirbadeynta, dhalaalashadu waxay bedeli doontaa gaaska godka.Haddii gaaska aan lagu sii dayn wakhtiga, waxay adkeyn doontaa in la buuxiyo dhalaalka, taas oo keeneysa mugga cirbadeynta oo aan ku filneyn oo aan awoodin in ay buuxiso godka.
2) Gaaska biyo-mareenka xuni wuxuu ku samayn doonaa cadaadis sare oo ka mid ah godka caaryada oo wuxuu dhex galayaa caagagga hoostiisa heer go'an oo cadaadis ah, taasoo keenta cillado tayo leh sida dalool, godadka, unug dabacsan, waalan iyo wixii la mid ah.
3) Sababtoo ah gaasta si aad ah ayaa loo cadaadiyaa, heerkulka godka caaryada ayaa si xoog leh u kaca, taas oo keenta burburka iyo gubashada dhalaalka ku hareeraysan, taas oo keenta carbonization maxaliga ah iyo soo jiidashada qaybaha caaga ah.Waxay inta badan ka soo baxdaa isku dhafka labada dhalaal, * xagal iyo flange gate.
4) Qalabka farsamada ee dalool dhalaaleed kastaa wuu kala duwan yahay, taas oo adkeynaysa in dhalaalku galo caaryada oo baabi'iyo calaamadda alxanka.
5) Sababtoo ah xannibaadda gaaska ee godka, waxay yareyn doontaa xawaaraha buuxinta caaryada, waxay saameyneysaa wareegga wax-soo-saarka waxayna yareyneysaa waxtarka wax soo saarka.
(3) Qaybinta goobooyin balaastig ah
Waxa godka ku jira saddex ilo gaas oo waaweyn: hawada ku ururtay godka;Gaaska ay soo saarto burburka alaabta ceeriin;Biyaha haraaga ah iyo uumiga biyaha ee alaabta ceeriin waxay leeyihiin meelo kala duwan oo goobooyin ah sababtoo ah ilo kala duwan.Waa maxay sababta caaryada duritaanku ay ugu qalabaysan yihiin habka qiiqa?Naqshadaynta caaryada.
1) Xumbo-xumada hawada ka dhalata hawo urursan oo ku jirta godka caaryada ayaa inta badan loo qaybiyaa booska ka soo horjeeda albaabka.
2) Xumbo ka dhalata burburka ama falcelinta kiimikaad ee alaabta ceeriin ee caagga ah waxaa lagu qaybiyaa dhumucda qaybaha balaastiga.
3) Xumbooyinka ka dhasha gaasta biyaha hadhaaga ah ee alaabta ceeriin ee balaastikada ah ayaa si aan joogto ahayn loogu qaybiyaa qaybta caagagga oo dhan.
Laga soo bilaabo qaybinta xumbo ee qaybaha caag ah ee kor ku xusan, ma xukumi karno oo kaliya dabeecadda xumbo, laakiin sidoo kale waxay xukumi kartaa in qaybta qiiqa ee caaryada ay tahay mid sax ah oo la isku halleyn karo.
Alaabta sifaysan, Khariidadda goobta, Nidaamyada Nadiifinta Caagagga Durida, Caagagga Caadiga ah ee Molded, Qalabka Durida, Sanduuqa Caaryada, Warshadda Caagagga ah, Geli Duritaan Ku Samaynta, Dhammaan Alaabta